Ireo tranonkala 19 tsara indrindra ho an'ny sary avo lenta | Famoronana an-tserasera
Ny tranokala sary maimaimpoana sy avo lenta dia azo jerena mora foana amin'ny Internet mba hanampiana anao ampiasao izy ireo hampiroborobo ny atiny raisinay amin'ny tambajotra sosialy, ampidiro ny sary orinasa ho an'ny serivisy manokana na asa ho an'ny oniversite izay tsy maintsy asehontsika ny fikasihan-tanana lehibe tokony ho fantatsika momba ny fomba hisafidianana zavatra hita maso mahasarika ny sain'ny olona.
Ho hitanao manaraka izany tranokala fakana sary mivelatra amin'ny 19 open source tsara kalitao. Na ireo tranokala ireo aza, toy ny pixabay, dia hamela anao hisintona endrika endrika lehibe sy avo indrindra raha mamorona kaonty maimaimpoana ianao. Tranonkala 19 izay tsy maintsy tsoratadidinao mba hanananao atiny lehibe amin'ny sary ho an'ny fampiasana rehetra.
5 Afaka aho
7 Fiainan'i Pix
9 Toerana maharatsy
12 Repoblika ISO
13 Refe maimaim-poana
17 Sarin'ny Stock Startup
19 Saham-bola taloha
Nanomboka tamin'i pixel izahay satria izy ireo no tranokala fakana sary mivelatra par tsara indrindra. Hahafahanao miditra amin'ny sary sy horonan-tsary 490.000 mahery ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra. Ny sary rehetra amin'ity tranokala ity dia manana lisansa Creative Commons CS0, izay midika fa azo ovaina izy ireo ary azo ampiasaina ara-barotra.
Azo antoka fa tsy fantatry ny maro ity tranonkala ity, fa raha mampiditra Shopify izahay dia azo antoka fa hanomboka hampifandray izany amin'ny iray amin'ireo tranonkala eCommerce malaza indrindra ianao izao. Ny tena izy dia Nandefa Burst i Shopify mba hanolotra sary loharano misokatra manana kalitao avo lenta ka ampiasain'ny mpampiasa. Ho anao ihany koa ireo rehetra ireo.
Tranonkala fakana sary kalitao loharano misokatra iray hafa izay mety tsy fantatrao. Ary izany dia satria teraka tamin'ny 2013 izy io miaraka amin'ny hevitra fa manana sary maro isan-karazany eo am-pelatananao ianao hanary araka izay itiavanao azy. Amin'ny ankapobeny dia izy ireo Sary maimaim-poana 600 maimaim-poana misy sokajy samihafa. Safidy hafa hodinihina amin'ny sary avo lenta.
Ao amin'ity tranonkala ity no ananantsika mpaka sary Ryan McGuire manolotra ny sariny maimaim-poana tanteraka sy amin'ny vahaolana avo. Ireo sary dia hita amin'ny sokajy samihafa toy ny biby, zavatra na natiora ary koa maro hafa. Isan-kerinandro ianao dia afaka manangona sary vaovao alefan'ity mpaka sary ity.
Araka ny asehon'ny teny filamatra ao amin'ny pejy lehibe an'ny IM Free, dia hahita a voafantina tsara ny famoronana endritsoratra endritsoratra ho an'ny fampiasana ara-barotra. Ao anatin'izany fanangonana atiny izany dia ahitanao ny saripika isan-karazany hanampiana kalitao amin'ny asanao manontolo, na bilaogy izany, eCommerce, pejy iray fitobiana na tranokala. Iray amin'ireo tena ilaina.
Amin'ny taonany efa ao aoriany, Morguefile dia manolotra sary maherin'ny 350.000 kalitao avo lenta amin'ny fampiasana ara-barotra sy manokana. Ny hany zavatra tsy maintsy omen'ny sary sasany voninahitra ho an'ny mpaka sary raha te hampiasa azy isika.
Tranonkala fakana sary mivelatra iray hafa izay manolotra fanangonana sary avo lenta. Tokony hankasitraka ny endrika tsara ananan'ny tranonkala miaraka amin'ireo singa web liana liana isika, ahoana no ahafahan'ireo hafa ireo. Lazainay fa ampahany amin'ny sary dia nomen'ny Leeroy Advertising Agency of Montreal tsy misy fameperana. Ny sary ho hitanao amin'ny media sosialy na ny tranonkalanao dia manana kalitao lehibe.
Izy io dia iray amin'ireo tranonkala manaitra indrindra, na dia izany aza mampiasa ny hafa toa ilay Freeography voalaza etsy ambony na Unsplash. Ny sary rehetra dia eo ambanin'ny lisansa Creative Commons Zero, ka fantatrao ny dikan'izany. Tranonkala iray manara-penitra iray hafa mba hanananay lisitra izay an-tananay ny karazan-tsary malalaka misokatra.
Raha tsy mahita sary manokana ianao na inona na inona antony, mankanesa any amin'ny Negative Space hitady ny motera fikarohana ao aminy na avy amin'ireo sokajy an'ity tranokala sary loharano misokatra kalitao ity. Isan-kerinandro dia hanana sary vaovao ianao hitodihana ary avy eo manova sy mamoaka izany amin'ny tambajotra sosialy.
Tranonkala iray, ankoatry ny fampiasana a endrika tsara amin'ny Internet hanolotra traikefa nahafinaritra mpampiasa, mampiasa andian-tsary loharano misokatra izay tena misy ankehitriny noho ny hatsaran-tarehiny. Ny iray amin'ireo tombony azony dia ny manome loko miloko amin'ny sary azy. Sarobidy tokoa amin'ity tranonkala ity ho an'ny mpamorona. Tena haitraitra.
Ny sanda lehibe ampiasainy dia ny tanjona napetrak'i RawPixel ho sary ny olona manerana an'izao tontolo izao, Ka raha mila mahita ny atiny ianao dia tranokala iray io raha mila sary mivelatra avo lenta. Tranonkala iray hafa tokony horaisina amin'ny karazana matihanina noho ny karazany sy ny hakantony.
Eto amin'ity tranonkala ity dia afaka mahita karazana sokajy mety ilainao ianao atiny maro karazana izay hatolotrao avy amin'ny tranokala na tambajotra sosialy tianao hampitaina amin'ny fahitana matsiro. Ny iray hafa amin'ireo vaovao ary mety tsy fantatry ny maro izany.
Safidy hafa amin'ny tranokalan-tranonkala momba ny loharano mivelatra ary misy izany mikendry ny hampiseho ny planeta fa tsy izay andehananay matetika isan'andro. Hafa iray hafa noho ny mahaliana fa manana amin'ny tianao indrindra mba hanananao loharano sy loharano kalitao hafa.
Tsy vao sambany nandalo ny lalanay ny Unsplash raketo ny repertoire lehibe momba ny sary loharano misokatra izany dia misy amin'ireo mpitsidika mandalo azy io. Sarina sary 10 vaovao isaky ny 10 andro amin'ny alàlan'ny tranonkalanao na famandrihana amin'ny mailakao. Toy ny ambiny, azonao atao ny mampiasa ny sarin'izy ireo amin'ny fampiasana ara-barotra sy manokana.
Iray amin'ireo mampiavaka an'ity tranonkala open source fakana sary ity ny manolotra sary izay maneho zavatra mampihetsi-po na mitantara tantara. Ity karazana atiny ity dia mety tsara amin'ny haino aman-jery sosialy na hanomezana dikany sasany amin'ireo sary fampiroboroboana na orinasa ireo. Isan'andro dia manome sary roa nataon'ny matihanina izy io hahafahanao misintona azy ireo maimaim-poana. Iray amin'ireo tena mahaliana.
Ny StockSnap dia mampiasa ny fahaizana manivana sary loharano misokatra maimaim-poana miaraka amin'ny tontolo andro, fironana, isan'ny fitsidihana na fisintomana, ary koa andian-teny maro hafa hahitanao ny sary ilainao amin'ny asanao. Ny iray hafa mikasika manokana sy manana kalitao tsara.
Sarin'ny Stock Startup
Tranonkala iray manasongadina ny fakana sary mivelatra mifandray akaiky amin'ny teknolojia vaovao. Manokana ho an'ireo bilaogera na tranokala mifandraika amin'ny fitaovana finday na fitaovana finday, hahafahan'izy ireo mampiseho amin'ny fomba kanto ny fomba fampiasan'izy ireo ny vokatra.
Ny sarin'ity mpaka sary ity dia manaitra tokoa ary ho afaka hisarika ny sain'ny mpanaraka anao raha misy amin'izy ireo dia mety ho lasa ampahany amin'ny atiny multimedia izay anananao ho azy ireo.
Raha izany no ilainao sary miota amin'ny taonan'ny tsipika, New Old Stock no zava-dehibe indrindra amin'ny tranonkala manomboka anio ary tsy maintsy ampidirinao amin'ny tianao indrindra mba tsy hahadino anao ny sary mainty sy fotsy kalitao.
Raha efa naniry bebe kokoa ianao, eto dia manana bebe kokoa tranokala handefasana sary loharano misokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny tranonkala tsara indrindra misintona sary loharano misokatra